Guddoomiyeyaasha Baarlamaanadda Jabuuti iyo Soomaaliya oo sameysanaya guddi-Saaxiibtinnimo – Kalfadhi
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo Guddoomiyaha Aqalka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka Jabuuti, ayaa maanta dib-ugu-soo laabtay magaalada Muqdishu, kaddib kulamo ay lasoo qaateen madaxda dalkaasi.
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullahi, ayaa sheegay in Guddoomiyeyaasha labada Aqal ee Baarlamaanka dowladda Soomaaliya iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Mohamed Ali Mohamed ay ku heshiiyeen in ay wada-shaqeeyaan, isla markaana la sameeyo guddi ka kooban min lix-xildhibaan oo ka socda labada Baarlamaan ee Jabuuti iyo Baarlamaanka Soomaaliya.
“Waxaan iskaashi ka sameyn doonnaa shirarka Baarlamaanada, lix-dda xildhibaan ee ka imaanaya dalka Soomaaliya waxaa min-saddex ay ka kala imaan doonaan labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Guddoomiyaha.
Mudane Cabdi Xaashi Cabdullahi, ayaa sheegay in kulankii ay la qaateen madaxweynaha dalka Jabuuti uu ahaa kulan ay dowadda Jabuuti ay uga mahadcelinayeen, taageeridda ay siiyo dowladda Soomaaliya.
Shirkii u dhexeeyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Mohamed Ali Mohamed iyo Guddoomiyeyaasha labada Aqalka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay khilaafkii labada Guddoomiye Aqal ee xalka laga gaaray.
“Waxaan isla meel-dhigtay in Baarlamaanka uu si wada-jir ah u wada-shaqeeyo, madaama uu muhiim u yahay dowladnimadda,” ayuu hadalkiisu kusoo gunaanuday Mudane Cabdi Xaashi.
Dowladda Jabuuti ayaa horay kaalin uga geysatay xalinta khilaafkii xoogganaa ee soo kala dhex-gallay Guddoomiyeyaasha labada Aqalka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Xaliimo Ismaaciil (Xaliimo yareey) ayaa digniin u dirtay Xisbiyada Siyaasadda ee aan dhamaystirin Shuruudihii Xisbinimo